မှုံရွှေရည် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်
မှုံရွှေရည် (အင်္ဂလိပ်: Hmone Shwe Yi) သည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်၏ အဖြူအမဲခေတ်ကာလမှ ကျော်ကြားခဲ့သော မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် စသည့်အနုပညာနယ်ပယ်များကို လွှမ်းခြုံနိုင်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ကာ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုခေတ်အထိတိုင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများမှ ထုတ်လွှင့်ပြသနေဆဲ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ မှုံရွှေရည် ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၇၀ ၌ကျင်းပသော (၁၉) ကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် ဇာတ်ကားဆုရရှိခဲ့၍ ဝင်းဦးသည်လည်း အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့သည်။
၆ ရုပ်ရှင်၏ အနုပညာကဏ္ဍ
"မှုံရွှေရည်"စကားလုံးသည် ဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်သော အဓိက အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် ခင်မှုံ ကိုရည်ညွှန်း၍ ဤ၌ "မှုံ"သည် (နှင်းဆီ)ပန်းဝတ်မှုန် ကိုညွှန်းဆိုကာ "ရွှေရည်" ဆိုသည်မှာ တိုက်ရိုက်အနေဖြင့် ရွှေရောင်လွှမ်းသော၊ ရွှေအဆင်းကဲ့သို့ဖြစ်သော၊ တနည်း ချစ်စရာကောင်းသော ဟူ၍ အနက်ရရှိသည်။ သို့သော်မြန်မာစာအဖွဲ့၏ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကြမ်းအရ ဝတ်မှုန်ဝတ်ဆံ တွင် နသတ်ဖြင့် မှုန် ဟူ၍သာ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ၌ ခင်မှုံကို အစွဲပြု၍ အမည်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ သီချင်းရေးဆရာဖြစ်သော ဂီတလုလင် မောင်ကိုကိုက "မှုံရွှေရည်"[မှတ်စု ၁] ဟူသော စကားစု၌ "မှုံ" ကို ယခင်တစ်ချိန်က ရှိထားပြီးသော "မှုန်ရွှေရည်" သီချင်းနှင့် မမှားစေရန် အသုံးပြုခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
မှုံရွှေရည်ဇာတ်ကား၏ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူ၊ မင်းသားနှင့် ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဝင်းဦး၏ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိဟုဆိုနိုင်သည့် ဆယ်စုခေတ်တနှစ်စွန်းမန်းသက်ြန်စာအုပ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းအသင်းက ဆုဖလားရရှိခဲ့သည့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၌ ဧရာဝတီတိုင်းသား ဘိုကလေးဇာတိသားဖြစ်သော ဂီတလုလင်ဦးကိုကိုတို့က အနိုင်ရဘောလုံးသမားများအတွက် ဂုဏ်ပြုဖျော်ဖြေပွဲကို ဦးစီးလုပ်ကြသည်။ ထိုဖျော်ဖြေပွဲညတွင် ဂီတလုလင်ဦးကိုကို၏ သား မြတ်သူနှင့် သမီး စန္ဒာလင်းတို့ကလည်း ပါဝင်ဖြေဖျော်ကြသည်။ ထိုပွဲ၌ မြတ်သူက ဗုံတီး၍ စန္ဒာလင်းက ကပြခဲ့သည်ကိုမြင်မိရာမှ မှုံရွှေရည်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သည့်အပြင် မှုံရွှေရည်စကားဝိုင်းတွင်လည်း ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော စန္ဒာလင်းကလည်း ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
မှုံရွှေရည်ရုပ်ရှင်ကို အပေါင်းလက္ခဏရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည် အတိတ်တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည့် မြတ်လေးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကာ ၎င်း၏ ပထမဆုံးရုပ်ရှင် 'ပင်လုံထိပ်ထားဦး'ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ ပိုင်ရှင်ပြောင်းခဲ့၍ ကုမ္ပဏီကိုပြန်လည် ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်တာရာကို နာမည်တပ်၍ ကုမ္ပဏီပြန်လျှောက်ခဲ့ကြရာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဦးဆောင်ရိုက်ကူးမည့်သူမရှိဖြစ်နေစဉ် ၁၉၆၇ ၌ ထိုကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများက ရုပ်ရှင်မင်းသားအောင်လွင်ထံသို့ ရောက်လာကြကာ မင်းသားဝင်းဦးထံတွင် ရိုက်ကူးရန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိနေသည်ဟု ကြားသိခဲ့၍ မင်းသားအောင်လွင်မှတဆင့် ဝင်းဦးအားပြေားပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ဝင်းဦးမှလည်း သူ့ထံတွင် စိတ်ကူးထားသော ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရှိ၍ အပေါင်းလက္ခဏာကုမ္ပဏီကို ရိုက်ပေးမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် အပေါင်းလက္ခဏာကုမ္ပဏီ၏ တစ်ကျော့ပြန် ပထမဆုံးရုပ်ရှင် 'မှုံရွှေရည်'ကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
သင်္ကြန်အခန်းများပါသော ဇာတ်ကွက်များကို မန္တလေး၌ ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ မှုံရွှေရည် ရေပက်ခံကားဖြင့် ကပြရင်းဝင်လာသော အခန်းကို မန္တလေးရှိ အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတောတစ်ခု၌ရိုက်ကူးကြသည်။ ဇာတ်ကားရိုက်ရက်များသော မင်းသမီး ခင်သန်းနုနှင့် တွဲရိုက်ရသော အခန်းများကို အချိန်လု၍ ရိုက်ကူးရသဖြင့် တစ်နေရာ၌ ဝင်းဦးသည် သေခါနီးဇာတ်ကွက်များရိုက်ရန် အစာမစားဘဲ အရက်များသာသောက်ဖိသောက်သောကြောင့် မျက်တွင်းများချိုင့်၍ ဝမ်းပျက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာမှ ထိုအခန်းကိုရိုက်ကူးသည်ဟု သရုပ်ဆောင် ဦးအောင်လွင်က ပြောဆိုသည်။ ဆက်လက်ပြောဆိုသည်မှာ ထိုစဉ်အခါ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ပုံစံရှိသော အခန်းများကို မရိုက်ကူးဘဲချန်ထား၍ သေခါနီးဇာတ်ကွက်ရိုက်ကူးပြီးမှ ပုံမှန်ပြန်လည်နေထိုင်ကာ လူကောင်းအခန်းများကို နောက်မှ ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ဇာတ်လမ်းခေါင်းစဉ် ဇာတ်ဝင်တေးဖြစ်သည့် 'မှုံရွှေရည်' သီချင်းကို ဂီတလုလင် ဦးကိုကိုမှ ရေးစပ်သီကုံး၍ ဝင်းဦးကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးတေးသံရှင် အနေဖြင့် အေဝမ်း တင်တင်လှက သီဆိုသည်။ သို့သော် ဂီတအနေဖြင့် ဇာတ်လမ်းမစခင် ပဏာမတေးသွားအဖြစ် မူတစ်မျိုး၊ ဇာတ်လမ်းသဘောအရ ကလေးငယ်တစ်ဦး၏ မဆိုတတ်ဆိုတတ်စွာဖြင့် သီဆိုရန်အခန်းအတွက် မူတစ်မျိုး၊ မင်းသားနှင့် မင်းသမီး ချစ်သူများဖြစ်သွားသောအခါ ပျော်ရွှင်စွာ သီဆိုရန် မူတစ်မျိုး၊ ဤမူသုံးမျိုးကို ဦးကိုကိုကပင် ဂီတစီစဉ်မှုပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နောက်ခံတေးဂီတသည်လည်း ဦးကိုကို၏ လက်ရာပင်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် နာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်တေးတစ်ပုဒ်မှာ 'မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာ' ဖြစ်၍ ဘိုကလေးတင့်အောင်မှ ရေးသားပေးခဲ့သည်။ သီချင်းရေးရန်အတွက် ဝင်းဦးက ဂီတစာဆို ဘိုကလေးတင့်အောင်ကို ၎င်း၏စိတ်ကူးနှင့် ဇာတ်လမ်းသဘောကို ပြောပြခဲ့ရာ 'မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာ' သီချင်းသည် ယခုအချိန်ထိ အဆိုတော်ပေါင်းများစွာ သီဆိုလျှက်ရှိသော တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
မှုံရွှေရည်၌ပါဝင်သော သီချင်းများကို အများအားဖြင့် စမ်းချောင်း၌ရှိသော မဟာမြိုင် ရုပ်ရှင်ခြံ (အေဝမ်းခြံ) တွင်သွင်းယူခဲ့သည်။ စင်ပေါ်တွင်ကသောအခါ သီချင်းများအား ကြိုတင်သွင်းယူထား၍ ကပြသည့်အနေအထားကို သီချင်းဖွင့်ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ကာ ထန်းတောထဲမှ ကပြသော အခန်းကို တိုက်ရိုက် သီဆိုကပြခြင်းဖြစ်၏ ။
ဤဇာတ်ကားသည် ရုပ်ရှင်ကဏ္ဍသဘောသာမက ပြဇာတ်သဘော အခြင်းရာများပါဝင်သောကြောင့် ဦးကိုကိုအတွက် ဂီတလုပ်ကွက်များစွာရရှိခဲ့သည့် ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည်။
ရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်သော ကကွက်များကို အဓိကအားဖြင့် ဆိုဗိယက်ပြန် လှမိုးက သင်ကြားပေးခဲ့သည့်အပြင် ပန်တျာကျောင်း (ရန်ကုန်)က ဆရာမများဖြစ်သော ဒေါ်ခင်ညွန့်၊ ဒေါ်ဝင်းတင်တို့မှ သင်ကြားပေးခဲ့ကြကာ အမေဖြစ်သူ မှုံ၏ကကွက်နှင့် သမီး၏ ကကွက်တူစေရန်လည်း အထူးသင်ကြားပေးခဲ့ကြသည်။ မှုံရွှေရည်ပါ ကကွက်များသည် ယနေ့သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များပေါ်၌ က​ပြနေဆဲကကွက်များဟု ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဆွေဇင်ထိုက်က သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
မှုံရွှေရည်ရုပ်ရှင်သည် သဘင်ပညာရှင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ သာမက မြန်မာ့ဂီတ၏ အခန်းကဏ္ဍများကိုလည်း တင်ဆက်ဖော်ကြူးထားသည်။ ထို့နောက် စန္ဒရား ဆရာတစ်ယောက်၏ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှား ရုပ်လုံးဖော်ထားသည်။
ဇာတ်လမ်းသည် ဇာတ်အဖွဲ့တစ်ခုကို အခြေတည်နောက်ခံထား၍ ဖန်တီးသည်။ ဇာတ်အဖွဲ့ပါလာသည့်အလျောက် ထိုဇာတ်အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှု၊ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဝင်းဦးက တင်ဆက်ဖော်ပြသည်။ ဇာတ်ပွဲတစ်ခု၏ ရှေ့ထွက် အော်ပရာကို ဣလိဿနှင့် ဒွိစိတ္တ (ဤအော်ပရာသဘောမှာ မယားတစ်ယောက်နှင့် လင်နှစ်ယောက်ဖြစ်သည်) ရွေးချယ်ရာ၌ ဇာတ်လမ်းပါ သရုပ်ဆောင်မင်းသား စန္ဒယားဆရာ မြင့်သူ၏ မိန်းမဖြစ်သူ မှုံအပေါ်ထားရှိသော သံသယစိတ်ကို ဖော်ပြရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မယားတစ်ယောက် လင်နှစ်ယောက်ဟုခေါ်သော ဣလိသနှင့် ဒွိစိတ္တသည် ဇာတ်လမ်းကို ပို့ပေးသည်။ ဤအော်ပရာကို ရွေးချယ်ရာ၌ စိတ်ကူးကောင်းသည်။ မယားဖြစ်သူ မှုံအပေါ် သံသယစိတ်ကို နိမိတ်ပြ စွပ်စွဲချင်သောကြောင့် ဇာတ်လိုက်ဖြစ်သူ စန္ဒရားဆရာ မြင့်သူကိုယ်တိုင် ဇာတ်စင်အောက်မှ ဖြည့်စွက်သီဆို၍ သံသယသဘောကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေသည်။
"မောင့်အပြင် နောက်လင် သူထားပါလို့၊ နောက်မှပေါ်တဲ့ ရွှေကြာ၊ မေကညာ မက်လေတော့၊ ခက်ပေါ့ ဒီဖေ၊ ဤလူ့ဘောင်တွင်း ရှောင်ခွင်းချင်ပေ။"
ဟူ၍ စန္ဒရားတီးလျှက် ဖော်ပြသီဆိုခဲ့သည်။
မှုံရွှေရည်ရုပ်ရည်သည် ဒရာမာချိုးသည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ရာ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုကို ပုံဖော်တင်ဆက်၍ ထိုအခြင်းရာဖြင့်ပင် ဇာတ်သိမ်းသည်။ ဇာတ်လမ်းသဘောအရ မပါမဖြစ်အရေးပါသော ပဋိပက္ခ (conflict) ဟန်များလည်း ထည့်သွင်းပုံဖော်ထားသည်။ ထိုပဋိပက္ခသဘောကို တင်ပြရာ၌ အတွင်းစိတ္တဇအခြင်းရာဖြစ်သော သံသယစိတ်ကို ယူငင်အသုံးချသည်။ မြင့်သူ၏ မှုံအပေါ် စိတ်ထဲ၌ဖြစ်ပေါ်နေသော သံသယစိတ်သည် ဇာတ်လမ်း၏ ပဋိပက္ခပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသံသယစိတ်၏ မကောင်းမှုသဘောကို အလေးပေး၍ ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုမကောင်းသည့် သံသရာမဆုံးသော သံသယစိတ်ကြောင့်ပင် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်တကွ မိမိနှင့် နီးစပ်သူများအားလုံးပါ စိတ်နှလုံးကြေကွဲ ဒုက္ခရောက်ရပုံများကို ဤရုပ်ရှင်၌ တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဆွေဇင်ထိုက်က "မှုံရွှေရည် ကားဟာသိပ်ကို အချိုးအကွေ့ကောင်းလေးပေါ့။ ရုပ်ရှင်ရဲ့ Turning Point တစ်ခုကို၊ ရုပ်ရှင် Flow ရဲ့ Turning Point တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကားလို့လည်း ယူဆတာပေါ့။" ဟူ၍ သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း တင်ဆက်မှု၊ အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း နောက်ခံတေးဂီတ တင်ဆက်မှုသည် အချိုးအကွေ့ အသစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုခေတ်ကာလများ၌ တေးဂီတနှင့်ပတ်သက်သော အကယ်ဒမီဆုမပေးသေးသည့် အချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဦးကိုကိုမှာ ဆုမရရှိခဲ့ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလတွင် (၁၀) ရက်ကြာကျင်းပခဲ့သော "MEMORY! International Film Festival 2019 (Yangon) " အမည်ဖြင့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုတွင် အခြားနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်အတူ မြန်မာဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်များဖြစ်သည့် မှုံရွှေရည်၊ မြဂနိုင်၊ အဖေတစ်ခု သားတစ်ခုဇာတ်ကားများကို ပြသခဲ့သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့အခြေစိုက် ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို အနုပညာအဖွဲ့အစည်း (Institue for Film and Fideo Art) အားဆန်နယ်လ် (Arsenal) မှ မြန်မာဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်လေးကား၏ ပွားထားသော ရုပ်ရှင်မူများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ထိုလေးကား၌ မှုံရွှေရည်သည် တစ်ကားအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် အီတလီနိုင်ငံ L'lmmagine Ritrovata အဖွဲ့ခွဲဖြစ်သော ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ရုပ်ရှင်ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းသည့် ဓာတ်ခွဲခန်း L'lmage Retrouvèe Ritrovata သို့ပို့ဆောင်၍ ဖလင်ရုပ်ရှင်ကို ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၆ တွင် အခမ်းနားဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းထားသော ရုပ်ရှင်ကို ပြန်လည်လွှဲအပ်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်တက်ရောက် လက်ခံခဲ့သည်။ ယခုအခါ၌ ဤရုပ်ရှင်ကို ဝန်ကြီးဌာန၏ မော်ကွန်းတိုက်၌ ထိန်းသိမ်းထားပြီ ဖြစ်သည်။
(၁၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု
၁ မှုံရွှေရည် ဇာတ်ကားဆု ၁၉၇၀
၂ ဝင်းဦး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု ၁၉၇၀
↑ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးအောင်လွင်အရ မှုံ/မှုန် အသံတူသီချင်းနှစ်ပုဒ်ရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၌ ဆိုသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် "ပထမတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ မှုံရွှေရည်ဆိုတဲ့ သီချင်းက နှစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ပထမ ဒဂုံတင်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ရေးတာ ရှိပါတယ်။ သူကတော့ မှုန်ရွှေရည် ခိုင်မာလာနှင်းဆီ မိုင်ဒါလင် ဆွိတီ ဘာညာနဲ့ စာသားမတူ ပါဘူး။ သူကတော့ မဟထိုး တစ်ချောင်းငင် နသတ်နဲ့ မှုန်ထားတယ်။ သေးသေးတင်နဲ့ မှုံတာကတော့ ဂီတလုလင်ဦးကိုကိုက ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။"'' ဟုဆိုထားသော်လည်း ၎င်းရေးသော အခြားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် (နသတ်မှုန်)သီချင်းသည် စစ်ကြိုခေတ်ကတည်းက သီချင်းဖြစ်၍ ရေးသူ ဒဂုန်မောင်ဖြစ်ပြီ တေးသီဆိုသူ မအေးမိ၊ သီချင်းအမည်မှာ ရွှေနှင်းဆီ ဟူ၍ အနည်းငယ် ကွဲလွဲစွာ ဖော်ပြထားသည်။
↑ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း၊ ဒုအကြိမ်၊ ၂၄၉
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ Thida Htay (13 April 2020)။ ‘မှုံရွှေရည်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (in Myanmar)။ 12 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ မှုံရွှေရည်နှင့် ကျွန်တော် (၁၂)၊ ဘကြီးအောင်(ရုပ်ရှင်) Archived6February 2021 at the Wayback Machine.)
↑ ‘မှုံရွှေရည်’နှင့် ကျွန်တော်(၁၃)၊ ဘကြီးအောင်(ရုပ်ရှင်)။ 17 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ LWIN MAR HTUN။ "MEMORY! Film Festival Under Way With French Actress Isabelle Huppert in Attendance"၊ The Irrawaddy၊ 19 November 2019။
↑ Myanmar 100 (MEMORY! International Film Heritage Festival)
↑ France, Italy, Germany hand over ancient Myanmar digitized film, documentary to MoI၊ November 17, 2018 ၊ Myanmar Digital News )။ 13 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မှုံရွှေရည်&oldid=674731" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။